ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: နိုင်ငံရေးသမား ရောင်းရန်ရှိသည် - အပိုင်း (၄) နိဂုံး
နိုင်ငံရေးသမား ရောင်းရန်ရှိသည် - အပိုင်း (၄) နိဂုံး
မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ NED ကွန်ရက်
NED ကို ၁၉၈၃ ခုနှစ် သမ္မတ ရေဂင် လက်ထက်မှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ ၁၉၇၀ ကျော်ကာလမှာ ဝါးတားဂိတ် အရေး ပေါ်ပေါက်ပြီး သမ္မတ နစ်ဆင်ဟာ သူ့ရဲ့ ဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် ရာထူးက နှုတ်ထွက် သွားရတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့ နောက်မှာ စီအိုင်အေဟာ လွှတ်တော်ကော်မတီပေါင်းစုံရဲ့ ဆက်တိုက် စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုတွေကို နှစ်ပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ သီတင်းပတ်တိုင်းလောက်မှာ စီအိုင်အေ သတင်းတွေ တက်နေတယ်။ စီအိုင်အေရဲ့ ဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေသာမက၊ တခါတရံမှာ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာတွေပါ ပေါ်ထွက်လာတယ်။ စီအိုင်အေအဖွဲ့ဟာ အကြီးအကျယ်နာမည်ပျက်ပြီး အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရအဖွဲ့အတွက်လည်း အရှက်ရစရာ ဖြစ်လာတယ်။
"၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာ လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်တွေကို ဆောင်ရွက်ဖို့ NED ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းသစ်ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်။ လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်ဆိုပေမဲ့ တကယ်တန်း အသစ်တွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်က စပြီး စီအိုင်အေဟာ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံခြား အဖွဲ့အစည်းတွေကို လျှို့ဝှက်ငွေထောက်ပံ့ပြီး ကြိုးကိုင်ကစားတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ခဲ့ပြီးသားပါ။ စီအိုင်အေရဲ့ အဲဒီကြီးမားတဲ့ စစ်ဆင်ရေး ကြီးဟာ ကမ္ဘာနဲ့ချီကျယ်ပြန့်ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ အလုပ်သမား သမဂ္ဂတွေ၊ စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လူငယ်နဲ့ ကျောင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုတွေ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဘာသာရေး အစည်းအရုံးတွေ၊ ပညာရှင်အဖွဲ့တွေ၊ ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့တွေနဲ့ သတင်းလုပ်ငန်းတွေကို ပစ်မှတ်ထားချဉ်းကပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်တွင်းရော ပြည်ပမှာပါ ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကာလတွေ အတွင်းမှာ စီအိုင်အေဟာ ကန့်လန့်ကာနောက်ကွယ်ကနေ သြဇာလွှမ်းမိုးပြီး တနိုင်ငံပြီး တနိုင်ငံ တဖွဲ့ပြီး တဖွဲ့မှာ အားကောင်းတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကို အသုံးပြုပြီး လက်ဝဲအဖွဲ့အစည်းတွေ ကို ချေမှုန်းခဲ့တယ်။ အစိုးရတွေကို ဖြုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ စီအိုင်အေရဲ့ အဲဒီအလုပ်ကို NED လက်လွှဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။"
(နိုင်ငံရေးသမားရောင်းရန်ရှိသည် အပိုင်း ၄ ပိုင်း ပြီးပါပြီ။)
6 - On The National Endowment For Democracy by Michael
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 2:05 PM
အကြောင်းရာ တစ်ခုကို ထိထိမိမိ ၊ ရဲရဲဝံ.၀ံ. ၊ လိုရင်းတိုရှင်း
This article is mostly right.
Burma dictatorship would be grow up by the US government.They made understanding and give and take already.